mairie-antananarivo – fampilazana sy fampitandremana ny « 4mi » teny amin’ny boriboritany faha efatra
fampilazana sy fampitandremana ny « 4mi » teny amin’ny boriboritany faha efatra
auteur 8 aogositra 2017 Commentaires fermés
Notanterahina omaly tamin’ny 8 ora sy sasany alina ny fanentanana sy fampilazana ary fampitandremana ireo « 4mi » teny amin’ny faritra Anosizato atsinanana, Anosibe ary Anosy akaikin’ny senat sy colas, amin’ny mba hialan’izy ireo eo amin’iny faritra iny.
Arakanyhitateny an-toeranatamin’nyalina, dia tenafenohipokatokoa ny manodidina ny boriboritany faha efatra. Ankoatry ny loto sy ny fofona avelan’izy ireo eo anefa, dia manjaka ihany koa ny tsy fandriampahalemana toy ny sinto-mahery sy ny haro-paosy. Ny olona sendra mody alina no matetika iharan’izany tranga izany.
Natao izao fampilazana sy fampitandremana an’izy ireo izao, dia mba hiomanan’izy ireo, ka tsy ho tampoka amin’izy ireo ny fanalana azy eo amin’ny toerana voarara.
Hamafisina etoana fa ho fitandrovana ny fahadiovana sy ny filaminan’ny tanàna ary indrindra ny fandriampahalemana hatrany no tanjona amin’izao hetsika izao. Araka ny voalazan’i Atoa RATSIMBARISON Herifidy, lefitra faharoan’ny delegen’ny boriboritany faha efatra,dia nanaiky ny hiala ireo « 4mi » ireo, na dia nisy somary nitabataba sy nanohitra ny filazana aza.
Androany alina amin’ny 8 ora sy sasany kosa no hatao ny dingana voalohany amin’ny fanalana ny « 4mi » eny amin’ireo toerana voalaza etsy ambony ireo, ka hitohy ny alarobia izany ka hifarana ny zoma ho avy izao. Mba hampaharitra ny asa dia hatao in-telo isankerina’andro mandritran’ny roa herin’andro ny fanalana.